Axmed Karaash oo la damacsan yahay in Sweden lagu bah dilo & Aaran Jaan oo qorshe cusub u dhigtay
NAIROBI(P-TIMES)- Tan iyo markii madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash) uu safaro ku marayey qaybo kamid ah dalka Germany ayaa waxaa soo baxayey muddooyinkii ugu dambeeyey warar sheegaya in uu uga sii gudbi doono dalka Sweden halkaas oo uu qorsheeyey in uu kulamo kula qaato jaaliyadda kasoo jeeda deegaanada Puntland iyo masuuliyiin kala duwan.
Safarka Karaash oo salka ku haya indha indhayn iyo kulamo uu la qaadanayo madaxda dalalka uu marayo ayaa waxaa xiligani soo wajahay xaalad culus, kadib markii xubno ka tirsan kooxda Aaran Jaan iyo Wakiilka Puntland ee dalka Sweden C/casiis Cilmi Birjeex uu soo jeediyey in uusan madaxweyne ku xigeenka Puntland wax kulan ah la qaadan jaaliyadda isla markaasna wax soo dhoweyn ah aysan u samaynin taas badalkeeda hawlaha kaga xidhan dalka Sweden uu ka qabsado muddada uu ku sugan yahay.
Wakiilka iyo xubnahan ka tirsan kooxda Aaran Jaan oo la sheegay in ay af duub ku hayaan arintani ayaa waxaa dalabkiisa kasoo hor jeestay xubno ka tirsan jaaliyadda Puntland ee ku dhaqan dalkaasi, kuwaas oo dhankooda kawada baabul xoogan iyo diyaar garow ay ugu jiraan soo dhoweynta madaxweyne ku xigeenka Puntland.
Hore waxaa u tagay dalka Sweden wasiirka wasaaradda Maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo aan wax kulan ah la samaynin jaaliyadda, kadib markii wakiilka dowladda Puntland ee dalka Sweden uu af duub ku sameeyey.
“Waxaan diyaarinaynaa soo dhoweynta madaxweyne ku xigeenka ee Sweden hasa yeeshee wakiilka dowladda Puntland ee dalka Sweden iyo kooxda Aaran Jaan ayaan raali ka ahayn in aan la kulano oo waxa ay rabaan in ay afduubtaan sidii wasiirkii Maaliyadda oo hore ay ugu af duubeen mana ahan wax aan yeelayno anagu” Sidaasi waxaa yidhi mid kamid ah jaaliyadda Puntland ee ku dhaqan dalka Sweden.
Hadaba Wakiilka Puntland ee dalka Sweden C/casiis Cilmi Birjeex ma shakhsi ka tirsan baa kooxda Aaran Jaan mise waa masuul ka tirsan Puntland oo ay muhiim u tahay in uu qaab wacan kula dhaqmo madaxda dowladda?
Inkastoo lagu magacaabay wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne Denni 8-dii bishani October ee sanadkani 2019 hadana waxaa jira tabashooyin ku aadan hawlihiisa shaqo, kuwaas oo ay ka muujinayaan jaaliyadda ku dhaqan dalkaasi Sweden.
HALKAN HOOSE KA EEG MAGACAABISTA BIRJEEX
Duf ku baxa dad cuqdadaysan oo inangumeed ah ayaad tihiin. Waxaad qodhaan waa yaq yaqsi cid idinka qaadanaysaa walahi ma jidho.